လာလီဂါအမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ အပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ #ဇီဒန်း - SPORTS MYANMAR
လာလီဂါအမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ အပေါ် မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ #ဇီဒန်း
ယနေ့ နံနက် အစောပိုင်းမှာ ကစားသွားခဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပွဲစဉ်မှာ ရီးရဲလ် အသင်းက အိုဆာဆူနာ အသင်းကို ဘာနေဗျူးမှာ ၂-၀ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ရီးရဲလ်အတွက် ဂိုးတွေကိုတော့ လူငယ်ကစားသမားလေးတွေဖြစ်တဲ့ ဗင်နီရှပ် ဂျူနီယာနဲ့ ရိုဒရီဂို တို့က သွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Real Madrid’s Brazilian forward Vinicius Junior gestures during the Spanish league football match between Real Madrid CF and CA Osasuna at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, on September 25, 2019. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)
နည်းပြကြီးဇီဒန်းရဲ့ ရီးရဲလ်အသင်းဟာ အခုနှစ်လာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာ ခြေစွမ်းမတည်ငြိမ်မှု အချို့ရှိနေပြီး ၆ပွဲကစား၎ပွဲသာအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ ခြေချော်မှုတွေကြောင့် အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မြို့ခံပြိုင်ဘက် အသင်းဖြစ်တဲ့ အေတီကို မက်ဒရစ်၊ အစဉ်အလာပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ ဘာစီလိုနာတို့ကို ကျော်ပြီး အခုလို ဦးဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိအချိန်ဟာ အမှတ်ပေးဇယားရပ်တည်မှုအကြောင်းကို စဉ်းစားဖို့ စောလွန်းနေသေးတယ်လို့ ဇီဒန်းက နားလည်ထားပုံပါပဲ။
Real Madrid’s Brazilian forward Rodrygo celebrates his goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and CA Osasuna at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, on September 25, 2019. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)
ပွဲအပြီး အင်တာဗျူး တခုမှာ ဇီဒန်းက –
” ကျွန်တော်တို့ အခုဆိုရင် အမှတ်ပေးဇယားကို ဦးဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမယ့်လည်း ဒါဟာ ဘာမှတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။အရေးကြီးတာက ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ဆက်သွားနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ကိုယ်လုပ်ဆောင် တဲ့ ကိစ္စတိုင်း မှာ ယုံကြည်မှု ထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့လျှောက် ကျွန်တော်တို့မှာ ခက်ခဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အခိုက်အတန့် တွေ လည်း ရှိလာ နိုင်ဦး မှာဖြစ်ပါတယ် ” လို့ ပြောသွား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ လူစားဝင်ရောက်လာပြီး ချက်ချင်းဆိုသလို ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ရိုဒရီဂို ကတော့ နည်းပြကြီး ဇီဒန်းဆီကနေ နောက်ထပ် အခွင့်အရေးတွေ ရဦးမယ်လို့ မျှော်လင့်နေပုံပါပဲ။ဇီဒန်း ဟာ သူအပါအဝင် အသင်းသားတိုင်းကို ရွေးချယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သိနားလည်တယ်လို့ ရိုဒရီဂိုက ယုံကြည်နေပါတယ်။
အင်တာဗျူးတခုမှာ ဇီဒန်းရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းရာမှာ ရိုဒရီဂိုက – ” သူအတော်လေးကိုပျော်နေမယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။တရာသီ လုံးအတွက် အသင်းမှာ ရှိတဲ့ ကစားသမား တိုင်းကို အသုံးပြု နိုင်တယ် ဆိုတာကိုလည်း သူ နားလည်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဆုဖလားတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ ပွဲအနိုင်ရလဒ်အတွက်ကြောင့် လည်း ကျွန်တော်အတော်လေးပျော်ရွှင်မိပါတယ် ” လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
Real Madrid’s Spanish defender Alvaro Odriozola (L) and Real Madrid’s Brazilian midfielder Casemiro (R) celebrate with teammates their second goal scored by Real Madrid’s Brazilian forward Rodrygo during the Spanish league football match between Real Madrid CF and CA Osasuna at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, on September 25, 2019. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)
ဂိုးတွေမသွင်းနိုင်မီမှာ ဘာနေဗျူးကွင်းအတွင်းကပရိသတ်တွေရဲ့ ဆူပူလှောင်ပြောင်အော်ဟစ်နေမှုအပေါ် ရိုဒရီဂိုက -” ရီးရဲလ်အသင်းဆိုတာဒါမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တာအချိန်မကြာသေးပေမယ့် ဒီကွင်းမှာ ကစားတိုင်းအမြဲအနိုင်ရဖို့ လိုတယ်ဆိုတာကို သင်ယူလေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြင်ပကလူတွေရဲ့ အသံကိုတော့ နားမထောင်နိုင်ပါဘူး။ကိုယ့်အအလုပ်ကိုပဲ ဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရီးရဲလ် အသင်းကို ဝေဖန်ပြစ်တင်တာတွေကတော့ အမြဲရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကအေးအေးဆေးရှိနေသလိုအရာရာအဆင်ပြေပြေပါပဲ ” လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
လာလီဂါအမှတျပေးဇယားထိပျဆုံးကိုရောကျလာခဲ့တဲ့ အပျေါ မှတျခကျြပေးလိုကျတဲ့ #ဇီဒနျး
ယနေ့ နံနကျ အစောပိုငျးမှာ ကစားသှားခဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပှဲစဉျမှာ ရီးရဲလျ အသငျးက အိုဆာဆူနာ အသငျးကို ဘာနဗြေူးမှာ ၂-၀ ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့ပါတယျ။ရီးရဲလျအတှကျ ဂိုးတှကေိုတော့ လူငယျကစားသမားလေးတှဖွေဈတဲ့ ဗငျနီရှပျ ဂြူနီယာနဲ့ ရိုဒရီဂို တို့က သှငျးယူပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
နညျးပွကွီးဇီဒနျးရဲ့ ရီးရဲလျအသငျးဟာ အခုနှဈလာလီဂါပွိုငျပှဲမှာ ခွစှေမျးမတညျငွိမျမှု အခြို့ရှိနပွေီး ၆ပှဲကစား၎ပှဲသာအနိုငျရခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ ပွိုငျဘကျတှရေဲ့ ခွခြေျောမှုတှကွေောငျ့ အမှတျပေးဇယားကို ဦးဆောငျသှားနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
မွို့ခံပွိုငျဘကျ အသငျးဖွဈတဲ့ အတေီကို မကျဒရဈ၊ အစဉျအလာပွိုငျဘကျဖွဈတဲ ဘာစီလိုနာတို့ကို ကြျောပွီး အခုလို ဦးဆောငျသှားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ လကျရှိအခြိနျဟာ အမှတျပေးဇယားရပျတညျမှုအကွောငျးကို စဉျးစားဖို့ စောလှနျးနသေေးတယျလို့ ဇီဒနျးက နားလညျထားပုံပါပဲ။
ပှဲအပွီး အငျတာဗြူး တခုမှာ ဇီဒနျးက –
” ကြှနျတျောတို့ အခုဆိုရငျ အမှတျပေးဇယားကို ဦးဆောငျသှားနိုငျခဲ့ပါပွီ။ဒါပမေယျ့လညျး ဒါဟာ ဘာမှတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။အရေးကွီးတာက ဒီလမျးကွောငျးပျေါမှာ ဆကျသှားနိုငျဖို့ ဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ အားလုံးဟာ ကိုယျလုပျဆောငျ တဲ့ ကိစ်စတိုငျး မှာ ယုံကွညျမှု ထားရှိရမှာဖွဈပါတယျ။ရှလြေှ့ောကျ ကြှနျတျောတို့မှာ ခကျခဲ့ ရှုပျထှေးတဲ့ အခိုကျအတနျ့ တှေ လညျး ရှိလာ နိုငျဦး မှာဖွဈပါတယျ ” လို့ ပွောသှား ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီပှဲမှာ လူစားဝငျရောကျလာပွီး ခကျြခငျြးဆိုသလို ဂိုးသှငျးနိုငျခဲ့တဲ့ ရိုဒရီဂို ကတော့ နညျးပွကွီး ဇီဒနျးဆီကနေ နောကျထပျ အခှငျ့အရေးတှေ ရဦးမယျလို့ မြှျောလငျ့နပေုံပါပဲ။ဇီဒနျး ဟာ သူအပါအဝငျ အသငျးသားတိုငျးကို ရှေးခယျြနိုငျတယျဆိုတာကို သိနားလညျတယျလို့ ရိုဒရီဂိုက ယုံကွညျနပေါတယျ။
အငျတာဗြူးတခုမှာ ဇီဒနျးရဲ့အကွောငျးကိုမေးမွနျးရာမှာ ရိုဒရီဂိုက – ” သူအတျောလေးကိုပြျောနမေယျလို့ ကြှနျတျောယူဆပါတယျ။တရာသီ လုံးအတှကျ အသငျးမှာ ရှိတဲ့ ကစားသမား တိုငျးကို အသုံးပွု နိုငျတယျ ဆိုတာကိုလညျး သူ နားလညျပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ကလညျး ဆုဖလားတှအေတှကျ တိုကျပှဲဝငျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ဒါဟာကြှနျတျောတို့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြ ပနျးတိုငျလညျးဖွဈပါတယျ။ဒီနေ့ ပှဲအနိုငျရလဒျအတှကျကွောငျ့ လညျး ကြှနျတျောအတျောလေးပြျောရှငျမိပါတယျ ” လို့ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ဂိုးတှမေသှငျးနိုငျမီမှာ ဘာနဗြေူးကှငျးအတှငျးကပရိသတျတှရေဲ့ ဆူပူလှောငျပွောငျအျောဟဈနမှေုအပျေါ ရိုဒရီဂိုက -” ရီးရဲလျအသငျးဆိုတာဒါမြိုးပဲဖွဈပါတယျ။ကြှနျတျောဒီကိုရောကျတာအခြိနျမကွာသေးပမေယျ့ ဒီကှငျးမှာ ကစားတိုငျးအမွဲအနိုငျရဖို့ လိုတယျဆိုတာကို သငျယူလလေ့ာခဲ့ပွီးပါပွီ။
ကြှနျတျောတို့ဟာ ပွငျပကလူတှရေဲ့ အသံကိုတော့ နားမထောငျနိုငျပါဘူး။ကိုယျ့အအလုပျကိုပဲ ဆကျလုပျရမှာဖွဈပါတယျ။ရီးရဲလျ အသငျးကို ဝဖေနျပွဈတငျတာတှကေတော့ အမွဲရှိနဦေးမှာဖွဈပွီး ကြှနျတျောတို့ကအေးအေးဆေးရှိနသေလိုအရာရာအဆငျပွပွေပေါပဲ ” လို့ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။